Site na Apple Apple achịcha na gam akporo Nougat, nyocha nke akụkọ ihe mere eme nke ụmụ bebi Android | Akụkọ akụrụngwa
Nyaahụ Google mere ọkwa aha ọhụrụ nke nsụgharị ọhụrụ nke gam akporo, nke ruo ugbu a anyị maara dị ka gam akporo 7.0 ma ọ bụ gam akporo N. O doro anya na ndakpọ olileanya ahụ nwere isi maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ niile na Android Nougat abụghị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla atụghị anya ya. Ọzọkwa, mgbe achọpụtara ụdị ọnụọgụ nke Google tinye na Googleplex, isi ụlọ ọrụ ya ama ama, ihe ahụ ghọrọ ihe na-adabara ọtụtụ ndị.
N'ime ogige nke ọfịs Google, a na-achịkọta nwa bebi Andy, nke ụdị niile nwere ya (ụdị mbụ nke sistemụ Google anaghị anọchite anya Andy, mana site na eji megharịa ọnụ) na anyị nwere ike ịsị na ọ dịlarị n'elu niile, nke Nougat, nke di oke mfe, omume nke onye choro choro were dika iwu.
N'iji eziokwu ahụ bụ na ọ bụ Fraịdee, anyị ga-eme nyocha dị omimi banyere isi bebi gam akporo na kwa ụdị dị iche iche ruru ahịa. Jikere ịchọpụta ihe ndị kachasị adọrọ mmasị ma dị egwu, n'etiti nke bụ dịka ọmụmaatụ aha mbụ nke gam akporo, A gam akporo na ikekwe ọ rụtụrụ aka na Cupertino.
Lee, anyị gosiri gị aha niile nsụgharị nke gam akporo na-ruru ahịa, yana nsụgharị ya n’ụdị ụtọ n’ime Spanish;
Apple achịcha (1.0): Apple achịcha
Achịcha banana (1.1): Achịcha banana
Achịcha Cupcake (1.5): Achịcha
Donut (v1.6): Donut ma ọ bụ donut
Clair (v2.0 / v2.1): Pepito ma ọ bụ àmụmà
Froyo (v2.2): Yogọt kpụkọrọ akpụkọ
Mmanụ acomụ (v3.0 / v3.1 / v3.2): Mmanụ acomụ
Ice cream Sanwichi (v4.0): Ice cream Sanwichi
Jelii agwa (v4.1 / v4.2 / v4.3): Jelii agwa ma ọ bụ gumdrop
Lollipop (v5.0 / v5.1): Nnukwu osisi
Marshmallow (v6.0): Marshmallow ma ọ bụ igwe ojii
Dị ka anyị gwara gị na mbụ Google kpebiri imepụta nwa bebi dị iche iche Andy maka ụdị ọ bụla nke gam akporo ebe Ice Ice Sanwichi. Ruo oge ahụ ọ nọ na-ejupụta n'ogige nke ọfịs ya na ihe na-atọ ụtọ nke na-adọghị mmasị onye ọ bụla. Taa, ọfụma nke nsụgharị nke gam akporo na ọrụ na Andy, enweghị ike ịghọta ma ọ bụrụ na enweghị ihe akpụrụ akpụ dị mkpa, na ọ furu efu mbụ kemgbe ọtụtụ afọ.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịchọpụta nke bụ Andys dị iche iche anyị nwere ike ịhụ, nọnyere anyị n'ihi na anyị ga-achọpụta nwa bebi nke ụdị gam akporo ọ bụla ewepụtara na ahịa. Anyị na-echekwa gị na njedebe nke isiokwu ka ị nwee ike ịgwa anyị ụdị nwa bebi ma ọ bụ akara ngosi nke Andy bụ nke masịrị gị na ihe niile anyị hụrụla.
1 Ice Cream Sanwichi
2 Gam akporo Jelii agwa
Ice Cream Sanwichi
Na mbipute Sanwichi Sanwichi Android bidoro atụmatụ Google iji gbanwee Andy dịka ụdị nke sistemụ arụmọrụ ọ bụla. Ruo ugbu a, onye ọrụ ọchụchọ ahụ anọwo na-ahụ maka ịtụkwasị ihe ụtọ kwekọrọ na ya dị ka akara ngosi nke ụdị ọ bụla nke gam akporo.
Na mbata nke ụdị a na ahịa Andy ghọrọ Sanwichi ice cream, na-adọba akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ya na ịhapụ akụkọ ihe mere eme otu n'ime ihe oyiyi kachasị ọmịiko na nke mbụ.
Gam akporo Jelii agwa
Ọgụgụ nke Andy gbanwere ghọọ nnukwu jelii agwa bụ n'ezie otu n'ime logos na ọnụ ọgụgụ anyị nwere mmasị na nke kachasị nke ihe niile anyị hụworo ugbu a. Dị ka ọchịchọ ịmata ihe, anyị nwere ike ịgwa gị na nhazi mbụ abụghị nke ikpeazụ na Google gbanwere ya n'ọtụtụ oge, ruo mgbe ọ hapụrụ ka anyị nwere ike ịhụ na onyonyo dị n'elu.
Onu ogugu a bu ihe akaebe na Google nwere ike ime ihe karie ya na akara ngosi ya, na Nougat ma obu Marshmallow bu otutu uzo karie onu ogugu nke afo ole na ole gara aga.
Android 4.4 bụ nnukwu mgbanwe maka sistemụ arụmọrụ Google, ọ ka bụ otu n'ime ụdị ndị a kacha eji taa. Ọ bụkwa oge mbụ Google kpebiri ịnabata nkwado nke sọftụwia ya. Aha e nyere ụdị a bụ Android KitKat na ọzọ search ibu kere a logo, nke ị nwere ike ịhụ nkwado ahụ ebe niile, ma ọ bụ ihe mbụ.
Mgbasa mgbasa ozi nke Nestlé malitere buru ibu ma anyị hụkwara Andy na mmanya mmanya mara mma. O doro anya na ọ bụrụ n'ile anya na nnukwu ụlọ ahịa, ị ka ga-ahụ KitKat na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ ọbụnadị otu n'ime mmanya mmanya ndị ama ama ghọrọ Andy.
con Android Lollipop Google dị ka o kpebiri ịkwụsị ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ, ọ dị mma ma na-emetụ ihe mbụ. N'oge a Andy na-ejide naanị lollipop n'otu aka ya, dị anya na ihe anyị nwere ike ịhụ, dịka ọmụmaatụ na Android KitKat ma ọ bụ gam akporo jelii agwa.
Anyị kwesịrị ịjụ onwe anyị ka Andy ga - esi "nri" na nnukwu lollipop ahụ nke buru ibu maka obere bebi ọ ha.
Marshmallow ọ bụghị oge mgbanwe n'akụkụ ọ bụla na n'ezie Akara ngosi nke ụdị gam akporo a eweghị ogologo oge ka Google mepụta ya. Ma nke ahụ bụ na Andy na-ejide igwe ojii dị ukwuu n'aka ya. Ọ dị mfe, kwụ ọtọ ma n'ezie ọ naghị ewe mmadụ ma ọ bụ ndị na-ahụ maka ịmepụta ya ọtụtụ oge.
Adịghị m onye mmebe ma ọ bụ ihe okike, mana echeghị m na ọ gaara esiri ya ike ịtụgharị Andy n'ime igwe ojii na-acha odo odo, ihe ga-enwerịrị uche onye ọ bụla.
N'ikpeazụ, anyị bịara na ọnụ ọgụgụ nke Andy ọkọnọ ụnyaahụ na na dị ka ị pụrụ ịhụ na ihe oyiyi bụ mfe ma dị na Google ekpebiela ịhapụ Andy dị ka ọ na-adịkarị, na-ebugo naanị ole na ole nougat nke agba di iche iche. Ebee ka ndị ahụ juru anya na na-achọkarị ịmata ihe?
Kedu ụdị ọnụọgụ ma ọ bụ akara ngosi ị masịrị ọtụtụ n'ime ndị niile anyị nwere ike ịhụ n'ime afọ ole na ole gara aga?. Gwa anyi na ohere edebere maka ikwu okwu na post a ma obu site na netwọdu ndi anyi no.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » android » Site na Apple Apple achịcha na gam akporo Nougat, nyocha nke akụkọ ihe mere eme nke ụmụ bebi gam akporo
Top 5 uzo ozo ka Evernote dị ka ọrụ njikwa